italia Archives | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Europe waa meel cajiib ah kulanka dhaqamada badan oo kala duwan - iyo caadooyinka, Kuliyadda. oo quruun waluba waxay leedahay aqoonsi oo kala duwan u gaar ah, oo barbar dhac kooxda martida ah xaq u galay taariikhda iyo wax kasta oo kale waxay bixisaa. Iyo dalal qaar ka mid ah, in sidoo kale ka dhigan cabitaanka flavorful! Kuwii…
Waxa la sameeyo Europe In February, Talooyin ku Socda
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo Musaafiriin u jiheysan Europe ee February ku raaxaysan karaan qaar ka mid ah indhaha ugu fiican qaarada Afrika ee dadkii badnaa-free, ay ka mid yihiin jiidashada weyn oo sida Talaabooyinka Isbaanish iyo Jannooyin ay Tivoli ah. February waa wax leeyr: kaalinta udgoon u dhaxeeya xilli fasax mashquul iyo mawjadaha guga. Haddii…
Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Boortaqiiska, Tilmaamaha Tareenka Safarka, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Taas oo meel ka wanaagsan in ay ku raaxaystaan ​​pizza badan dalka in ay soo hindiseen, xaq u? jacaylka Talyaaniga, jeclahay, jecel this hadhuudhka fudud-jeestay delicious! No dheriwadaag yaab in Italy waxaa qaab saafi ah oo farshaxanka jeestay, oo waxaa ugu dambeyntii UNESCO-ansixiyey! Barqiyey agagaarka Italy, you’ll find pizzerias opened in…
Waqtiga Akhriska: 3 daqiiqo Italy waa mid ka mid ah dalalka ugu caansan ee Europe si ay u booqdaan sababtoo ah kala duwan ee meelaha xuduudaha ay gudahood. Northern Italy waa kulkulul League ah marka ay timaado dhaqanka Talyaani, iyadoo si ka badan dadka u safraya si ay u arkaan iyo samayn. Haddii sampling khamriga wanaagsan…